Umatshini weNkxaso yeWrist-Abavelisi beNkxaso yeWrist China, abaXhasi
Ixhasa ukuphiliswa kweentsholongwane ezonakalisiweyo kunye neebhulethi, ukuphefumla okuphezulu okuphezulu, noncedo lwezinto ezibonakalayo ezikhuselekileyo ukukhusela isandla. Inceda ukunciphisa umda weentshukumo zokomeleza intuthuzelo. Isixhobo esifanelekileyo sokukhusela isandla sabantu abadala abathanda imisebenzi yezemidlalo yangaphandle ngokuqinisekileyo njengokuhamba ngebhayisikile, ukuhamba ngebhayisikile, ubunzima bomzimba, umthambo kunye nokuqina. I-elastic thumb loop yokuqina kunye nokusonga ngokukhawuleza
Ixhasa ukuphiliswa kweentsumpa ezonakalisiweyo kunye neebhutsi, ukuphefumla okuphezulu, kunye noncedo lwezinto ezikhuselekileyo zokukhusela isandla, kukuthintela nokuphilisa nakuphi na ukwenzakala kwezemidlalo. Inceda ukunciphisa umda weentshukumo zokomeleza intuthuzelo. Isixhobo esifanelekileyo sokukhusela isandla sabantu abadala abathanda imisebenzi yezemidlalo yangaphandle ngokuqinisekileyo njengokuhamba ngebhayisikile, ukuhamba ngebhayisikile, ubunzima bomzimba, umthambo kunye nokuqina.
Umtya wentloko yesandla
Inika inkxaso yokuzinza ngokulinganayo kwizandla ezenzakeleyo. Inceda ekuboneleleni isiqabu kwiimpawu ezinxulumene neCarpel Tunnel Syndrome Plush, ukushukuma kunceda ukukhusela isihlahla sakho xa ulele. Iibhulukhwe zokuhombisa zinceda ukukhuthaza ukungathathi hlangothi ngexesha lokulala. Ukususwa kwentaba kwentende yesandla ngenkxaso oyenzayo. Ifanela isandla sasekunene okanye sasekhohlo. Iyaphefumla, yomelele kwaye ithambile.
Inkxaso yealuminium yetafile